၂ မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
၂ မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ညဖက်တွေမှာ အိပ်မပျော်တဲ့ပြဿနာဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ လူအများကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရင်းကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ အစားအသောက်ညီမျှမှုမရှိတာတွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ တစ်နေ့တာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ညဖက်မှာ သေချာအိပ်စက်ဖို့လိုအပ်တာကြောင့် စက္ကန့် ၁၂၀ အတွင်းမှာပဲ အိပ်ပျော်သွားစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် နည်းလမ်း ၁ လျှာ၊ မေးရိုးနှင့် …
အရမ်းချစ်တယ်ဆိုရင် စောင့်လိုက်ပါ လူတစ်ယောက်ကို တကယ် ချစ်တယ် ဆိုရင် စောင့်ဆိုင်းခြင်းကို လေ့ကျင့် သင်ယူလိုက်ပါ …. ။ဒီနေ့ အတွက် ကိုယ်နဲ့ အတူတူ ဘေးနားမှာ မရှိနိုင်ပေမယ့် နောင် အနာဂတ် အတွက်တော့ သူ တစ်နေ့ ကိုယ့်အနားကို ရောက်လာနိုင်ပါသေးတယ် …. ။ လူတစ်ယောက်ကို တကယ် ချစ်တယ် ဆိုရင် …
လျှာကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ အမေအိုနှင့် ဆေးကုပေးဖို့ လူထွက်ပြီး ငွေရှာမယ်ဆိုတဲ့ ရဟန်းငယ်တစ်ပါးရဲ့ ဒုက္ခ ဦးခေမိန္ဒ ……… ဦးခေမိန္ဒသည် ရဟန်းငယ်တစ်ပါးပီပီ ဘဝကိုမခံချင်တဲ့စိတ်ဖြင့် စာကိုအလွန်ကြိုးစားသူ __ရဟန်းလည်းဖြစ်သလို၊ ကိုယ်ဒူးကိုယ်ချွန်ပြီးလည်းနိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ် __(ရန်ကုန်)ကိုလည်း တက်နေသည့်ရဟန်းလည်းဖြစ်၏၊ တနေ့…… တက္ကသိုလ်ကနေချမှတ်ပေးလိုက်သည့် ပြဌာန်းစာကို သဲသဲမဲမဲလေ့လာကျက်မှတ်နေသည် နေ့ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးပြီး သူငယ်ချင်းရဟန်းတွေကျိန်းစက်နေပေမယ့်လည်း သူကားမကျိန်းစက်နိုင်ပေးထားသည့်စာကိုမရသေးလို့ သာဖြစ်၏ ထိုအချိန်တွင် …
သောကြာသားသမီးများ၏ အချစ်ရေး စိတ်နေ သဘောထား သင့်ချစ်သူက သောကြာသားသမီး ဆိုရင် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါတော့နော် …. ။ သောကြာသားသမီးများ၏ အချစ်ရေး စိတ်နေ သဘောထားလေးတွေပါ … ။ သောကြာနေ့ သားသမီးတွေဟာ သူတို့ချစ်တဲ့သူ တယောက်တည်းအပေါ် အစွဲလမ်းကြီးစွာ ချစ်လေ့ရှိပါတယ်။ (မချစ်ရင်တော့ ) ၁။ အချစ်ရဲ့ တန်ပြန်မှု အပေါ် အကြာခဏ …
နေ့ခင်းကြောင်တောင် ဘုရာပေါ်မှာ ၆ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို ခွေးဇာတ်ခင်း ဘုရားပေါ်မှာခွေးဇာတ်ခင်းတဲ့ကောင် ပဲခူးမြို့ရွှေမော်ဓောစေတီ ဘုရားရင်ပြင်တော် အရှေ့မြောက်ထောင့်ရှိ ကိုးန၀င်းစေတီအနီးတွင်(၇.၅.၂၀၁၉)နေ့ နေ့လည်(၁)နာရီကျော်အချိန်ခန့်က သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ဖြစ်စဉ်မှာ နိုင်ဇင်အောင်(၁၈)နှစ်၊(ဘ)ဦးထွန်းရီ၊ဖရဲကျေးရွာ၊သနပ်ပင်မြို့နေသူမှ ခယ်မဖြစ်သူ မ—-(၆)နှစ်၊ဖရဲကျေးရွာ၊သနပ်ပင်မြို့နေသူအားသားမယားအဖြင့်ပြုကျင့်နေသဖြင့်ဘုရားလုံခြုံရေးအဖွဲ့မှ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်သူ နိုင်ဇင်အောင်အားဖမ်းဆီးပြီး ပဲခူးမြို့မရဲစခန်းသို့ပို့ဆောင်ကာ အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်လျှက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ် …. ။ Ko Thant Zin Unicode နခေ့ငျးကွောငျတောငျ ဘုရာပျေါမှာ ၆ နှဈအရှယျမိနျးကလေးကို …
❝ မကျွေးချင်ရင် မပြပါနဲ့ ❞
❝ မကျွေးချင်ရင် မပြပါနဲ့ ❞ (မြန်မာမိန်းကလေးများအတွက် စေတနာဖြင့်…သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ရိုင်းသလို ဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်။) မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသူတစ်ဦးနှင့် ကျောင်းသားတစ်ဦး စကားပြောနေသည်ကို ဆရာမက… ဘေးမှ နားထောင်နေသည်။ “ကောင်းဇော်ရေ၊ဒီမှာ ကြည့်ပါအုံး။ ငါ့အိမ်က ပေးလိုက်တာပန်းသီးတစ်လုံး၊အရမ်းစားလို့ ကောင်းမှာပဲာ့” “ငါ့ကိုလည်း တစ်ခြမ်းကျွေးပါလား အိအိရယ်၊ ငါလည်း စားချင်လို့ပါ” “အောင်မာ၊ ဘာလို့ …
ဖွားရာဇာတိနှင့် ဖွားသက္ကရာဇ် အရှင်သေဋ္ဌဥာဏာလင်္ကာရသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရေဦးမြို့နယ် ရွာဗုကြီးရွာ ခမည်းတော် ဦးတင်စော- မယ်တော် ဒေါ်အုံးခတို့မှ ၁၃၄ဝ ပြည့်နှစ် တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၄ ရက် (သောကြာနေ့)တွင် ဖွားမြင် သော သားရတနာ ဖြစ်သည်။ ဥပသမ္ပဒမင်္ဂလာ ၁၃၆၁ ခုနှစ် တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ၇ မိုင် …
နားထောင်မိတိုင်း မျက်ရည်ကျစေမယ့် အဆိုတော် အယ်နီရှိုင်းရဲ့”နှလုံးသားမှလှုပ်ရှားလာသောငလျင်” သီချင်းဗီဒီယို
မိခင်ဆိုတာ သားသမီးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲက သက်ရှိဘုရားတစ်ဆူမို့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အားကိုးချစ်ခင်မှုကို အပိုင်ဆိုင်ရဆုံးသော လူသားတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မမြဲတဲ့ လောကဓံတရားနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပြီး ချစ်ရတဲ့ မိခင်နဲ့ ခွဲခွာရတဲ့အခါ သားသမီးတွေရဲ့ရင်မှာ ဖြေမဆည်နိုင်အောင် ခံစားရတတ်တာ ကြုံဖူးသူတိုင်း သိကြမှာပါ။ လတ်တလောမှာတော့ သူကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ခံစားချက်ကို ရေးသားသီဆိုထားတဲ့ အဆိုတော်မလေး အယ်နီရှိုင်းရဲ့”နှလုံးသားမှလှုပ်ရှားလာသောငလျင်” သီချင်းဗီဒီယိုလေးက မိခင်ကိုချစ်တဲ့သူတိုင်း …
မျိုးပွားအင်္ဂါနှစ်ခုပါတဲ့ အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင် ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူဘဝအတွင်းရေး
မျိုးပွားအင်္ဂါနှစ်ခုပါတဲ့ အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင် ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူဘဝအတွင်းရေး အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝစ္စကွန်ဆင် ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် (၂၁) နှစ် အတွက် မက်ဒီ ရှုလာ ဟာ မွေးကတည်းက ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေ တစ်ခု ပါဝင်လာ ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သူမမှာ မျိုးပွားအင်္ဂါ ( Reproduction Organ …
ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ဖို့ မအေးအေးဝင်းဆီမှာ မိုးအောင်ရင်ကို ပြန်အပ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ အောင်ရင်
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ မင်းသားချောလေး မိုးအောင်ရင်ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် (၁၇) နှစ် ချမှတ်ခံထားရမှ ဒီကနေ့ မေလ(၇) ရက်နေ့မှာတော့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွတ်မြောက်လာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးအောင်ရင်အတွက် ခင်မင်ရင်းနှီးရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရော၊ ပရိသတ်တွေကပါ ဝမ်းသာမဆုံး ဖြစ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးအောင်ရင်ရဲ့ မိသားစုတွေဖြစ်တဲ့ အောင်ရင်တို့ကလည်း အိပ်မက်ဆိုးကြီးတစ်ခုကနေ လွတ်မြောက်လာပြီလို့တောင် ဆိုထားပါတယ်။ …